Alaabada Apple | Xogta IPhone (Bogga 4)
Noocyada cusub ee xargaha xagaaga ee loogu talagalay Apple Watch hadda waa la heli karaa
Noocyada cusub ee xarkaha Apple Watch ayaa hadda laga heli karaa websaydhka Apple wuxuuna ka kooban yahay 4 midab.
Maxaa dhacaya haddii aan ku beddelo router-keyga guriga aaladaha HomeKit?
Markaad beddesho routerkaaga iyo adeegaha adeegga internetka ee guriga, waa inaad dib-u-dejisaa dhammaan aaladaha ku xiran HomeKit
Dukaammada cusub ee Apple ayaa toddobaadkan dib loo furi doonaa
Dukaammada Apple ee soo socda ee albaabada loo furi doono toddobaadkan waa kuwa ku yaal Imaaraadka Carabta.
Apple waxay kireysataa Amazon Video fulinta James DeLorenzo si kor loogu qaado cayaaraha Apple TV +
Apple wuxuu shaqaaleysiiyaa Amazon Video fuliyaha James DeLorenzo si uu ugu xoojiyo isboortiga Apple TV +. Saxeexan iyo awoodda dhaqaale ee Apple, wax kasta waan ka filan karnaa.
Apple wuxuu sii daayaa beta-kii ugu horreeyay ee watchOS 6.2.8 iyo tvOS 13.4.8
Galabnimadii shalay, waqtiga Isbaanishka, Apple waxay soo saartay server-yada Apple si ay u bilaabaan betas cusub, betas labadaba ...
Eve Cam HomeKit Secure Video camera ayaa hada la heli karaa si loo dalbado
Kaamirada Eve Cam HomeKit Secure Video waa la heli karaa si loo dalbado hadda. Waxaad ku keydin kartaa ilaa toban maalmood oo duubista ah Apple iCloud.
Waligaa ha ka iibsan iPhone ka providence shaki
Ka fogaanshaha iibsashada shey la xadi karo kiiska Apple wuxuu naga badbaadin karaa madax xanuun badan
Apple Music waxay ku biirtay muusigga Madoow ee lagu taageerayo dhaqdhaqaaqa cunsuriyadda ee Mareykanka
Apple Music waxay kubiirtay Black Out Talaadada iyadoo leh meel cusub oo milicsiga iyo taageerida ladagaalanka cunsuriyada kajirta Mareykanka.
Talyaanigu wuxuu bilaabay barnaamijkiisa moobiilka si loola socdo coronavirus
Talyaaniga gudahiisa waxay horey u haysteen codsi toos ah oo loogu sameeyay Apple iyo Google xiriir la raadinta API si loo joojiyo coronavirus
Dheecooyin badan ayaa ka soo kordhay Apple Leather Loop Loop cusub
Apple waxay go aansatay inay cusbooneysiiso Loop-ka maqaarka oo xogaha ugu dambeeyay waxay nagu tusayaan fiidiyow iyo sawirro si faahfaahsan u weyn
Apple waxay maal galisay 330 milyan shirkad MicroLED ah
Apple ayaa lagu soo waramayaa in ay maal gashatay $ 330 milyan shirkad Taiwanese ah oo ku takhasustay qaybaha MicroLED si kor loogu qaado horumarkiisa.
Tile wuxuu cabashadiisa ka dhanka ah Apple u dirayaa Midowga Yurub
Shirkadda Californian-ka ee Tile, ayaa muujisay raaxo-darrada ay ka qabto dhaqdhaqaaqa ay Apple sameyneyso si aysan wax soo saarkoodu si sax ah ugu shaqeyn
Apple TV + dacwadii xatooyada adeega ee shaqada laga joojiyay
Dacwadda ka dhanka ah Apple iyo M. Night Shyamalan ee taxanaha adeegaha ah ee laga heli karo Apple TV +, waxaa diiday maxkamadda federaalka ah ee California
Ma jiri doono MicroLED Apple Watch sanadkaan sida uu qabo falanqeeye
Xogta qaar waxay soo jeedineysaa in Apple Watch uusan heli doonin MicroLED inta lagu gudajiro sanadkan 2020, Apple wuxuu ku dhamaan doonaa sugida waxyar.
AutoSleep waxay ku darsataa xusuusinta amarada iyo digniinta casriga ah casriyeyntii ugu dambeysay
Barnaamijka kormeerka hurdada ee AutoSleep ayaa hada helay casriyeyn cusub oo ku dareysa alaarmiga caqliga badan iyo xasuusinta amarada.
Midabada cusub ee Powerbeats Pro hadda waa rasmi
Apple ayaa soo saareysa midabada cusub ee Powerbeats Pro. Waa midabada la sheegay dhowr todobaad ka hor: casaan, buluug cirka, pistachio green iyo pink.
SpongeBob wuxuu ku degaa Apple Arcade oo uu weheliyo 'The Krabby Hunt'
SpongeBob oo cinwaankeedu yahay ugaarsiga 'Krabby Hunt' waa ciyaartii ugu dambeysay ee hadda ka degtay barnaamijka Apple Arcade
Jiil saddexaad oo iPod ah oo aad u xiiso badan ayaa soo daadanaya
Qoraalka maanta xiisaha lihi waa jiilka saddexaad ee iPod Touch, waana in nooc horudhac ah oo soo muuqday uu leeyahay kamarad gadaal ah.
YouTube Kids ayaa hadda laga heli karaa Apple TV
YouTube Kids ayaa hadda laga heli karaa Apple TV. Xagaagan gaar ahaan wuu sii dheeraan doonaa, oo aaladaha badan ee aan haysano YouTube Kids ee la heli karo, ayaa ka sii fiican.
Cayayaanka aan ogoleyn in la furo barnaamijyada ayaa la waayey
Waqtigan xaadirka ah Apple waxay sheeganeysaa inay xallisay "bug" kii sababay muuqaalka farriintan mana jiri doonto isticmaaleyaal kale oo la xanuunsanaya.
Wax badan oo cusbooneysiin ah oo ku saabsan App Store? Kulligeen isku mid ayaan nahay
Haddii aad si lama filaan ah u haysatid wax ka badan 15 barnaamij oo aad ku cusboonaysiiso App Store, ha ka welwelin, waa wax nagu dhaca dhammaanteen.
Soo saarista muraayadaha Apple-ka ayaa bilaaban doonta 2021
Muraayadaha Apple ayaa bilaabi kara wax soo saarka sanadka soo socda sida ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyay
Apple TV + siideynta Tom Hanks 'WWII movie: Greyhound
Daahida filimka cusub ee Tom Hanks Greyhound oo dib udhac ku yimid awgiis, Apple TV + ayaa qaaday adduunka.
Duolingo durba wuxuu leeyahay hab mugdi ah oo ku saabsan IOS
Codsiga Duolingo hadda wuxuu leeyahay qaab mugdi ah oo loo heli karo nooca barnaamijka ee ku saabsan iOS iyo iPadOs.
Qaar ka mid ah Dukaamada Apple ee Mareykanka iyo Kanada ayaa albaabada loo furay toddobaadkan
Dib u furida dukaamada Apple ku leedahay daafaha dunida ayaa kasii socda Mareykanka iyo Canada, halkaasoo 37 Apple Stores ay albaabada u furi doonaan.
Kuwani waa labada xarigood ee "Kibirka" cusub ee Ilaalada
Maanta labadan xarigood ee cusub ayaa la soo daayay waana markii ugu horreysay ee Apple ay soo bandhigto xarigyo sharaf leh oo lagu xuso noocyadeeda silikoonka ah.
Logitech wuxuu soo bandhigayaa Kaamiro Muuqaal Wareeg Cusub leh Videok Homekit Secure ah
Logitech wuxuu soo bandhigayaa kamarad cusub oo loo yaqaan 'Circle View camera' oo leh Homekit Secure Video. Aragtida shahaadada 180, aragtida habeenka iyo Homekit Secure Video waafaqsan
Difaaca taxanaha abuure Jacob wuxuu ku andacooday inuu markii hore tixgeliyay sameynta filim
Isaga oo difaacaya iibiyaha Yacquub wuxuu sheegayaa inuu markii hore qorsheynayay inuu sameeyo filim ku saleysan buuggan.
Hurdada Hurdada ayaa barnaamij gooni ah u soo bandhigaysa Apple Watch
Mid ka mid ah barnaamijyada ugu caansan ee lagula socdo hurdada Apple Watch, ayaa hadda la cusbooneysiiyay si buuxda uga madax bannaan iPhone-ka.
Xargaha silsiladda cusub ee UAG ee loo yaqaan 'Apple Watch' oo leh lifaaq dhaqameed
UAG waxay soo bandhigtay noocyo kala duwan oo xarig ah oo loogu talagalay Apple Watch, xargaha laga sameeyay silikoonka iyo suunka dhaqameed
Xirmooyinka Monowear iyo Kiiska loogu talagalay Apple Watch
Waxaan ku falanqeyneynaa laba xarig oo ka soo jeeda nooca monowear iyo kiiska safarka ee iyaga kaydiya isla mar ahaantaana u shaqeeya saldhigga lacag-bixinta ee smartwatch-kaaga.
Apple TV + ayaa soo bandhigi doonta dhacdo gaar ah oo karantiil ah oo ku saabsan "Mythic Quest: Raven's Banquet"
Apple TV + ayaa soo bandhigi doonta dhacdo gaar ah oo karantiil ah oo ku saabsan "Mythic Quest: Raven's Banquet." Waxaa lagu duubay iphone iyo jilayaasha guryahooda.
Dukaanka Apple ee ku yaal Talyaaniga ayaa dib loo furi doonaa 19-ka bisha May
Laga bilaabo Talaadada soo socota, 19ka Maajo, qaar ka mid ah Dukaanka Apple ee ku yaal Talyaaniga ayaa dib u furi doona albaabadooda markale 10 todobaad ka dib markii la xiray.
WatchOS 5 beta 6.2.5 ayaa hadda loo heli karaa horumariyeyaasha
Horumariyayaashu waxay horeyba u heleen nooca beta-ka ee watchOS 6.2.5 oo la heli karo waxayna ku dareysaa horumarin xagga xasilloonida iyo amniga nidaamka
Sofia Coppola si ay ula qabsato Edith Wharton sheeko-xireedkeeda kastamka waddanka ee Apple TV +
Sofia Coppola waxay ku soo laabatay inay la shaqeyso Apple si loogu soo gudbiyo adeegga fiidiyowga iyada oo la waafajinaysa sheeko cusub oo Edith Wharton ah
Kuwani waxay noqon doonaan qeexitaannada ugu muhiimsan, taariikhda la sii daayo iyo qiimaha Studio-ka AirPods
Istuudiyaha cusub ee 'AirPods Studio' wuxuu ku dari doonaa sheeko cusub heer sare marka laga hadlayo dareemayaasha, isleegidda, naqshada iyo qiimaha.
Bishii Juun 19 ayaa Apple ku soo bandhigeysaa dokumenteriga "Aabayaasha" Apple TV +
Dukumiintiga cusub ee imanaya adeegga fiidiyowga ee Apple ayaa cinwaan looga dhigay Aabayaal iyo annaga doorka aabbanimada ee is beddelaya.
Switzerland waxay furi doontaa dhammaan Dukaammada Apple toddobaadkan
Laga bilaabo berri, May 12, Apple Store ee Switzerland wuxuu albaabada u furi doonaa saacadaha la dhimay laga bilaabo 11-ka ilaa 18-da maqribnimo.
Gelinta Podcast waxay u timaaddaa Apple Watch oo leh nooca ugu dambeeya ee Overcast
Kooxda Overcast waxay cusbooneysiisaa barnaamijka caanka ah ee Podcast-ka oo u oggolaanaya qulqulka iyada oo loo marayo Apple Watch iyo isku xirnaanta xogta moobiilka.
The watchOS cusub 7 ayaa xoogaa diiradda saari doona caafimaadka dadka
Warka ku saabsan nidaamka qalliinka watchOS 7 wuxuu sii wadaa inuu ka hadlo dareeraha oksijiinta dhiigga iyo ogaanshaha weerarada argagaxa
Apple Watch ayaa xukuntay suuqa smartwatch oo leh 55% saamiga suuqa
Marka loo eego Istaraatiijiyadda Istaraatiijiyadeed, Apple wuxuu sii wadaa inuu xukumo suuqa loogu talagalay smartwatches oo aad uga dambeeya Samsung, oo ah kan labaad ee liiska.
Kani waa kamaradda cusub ee Logitech oo leh HomeKit
Logitech waa mid ka mid ah shirkadaha ka shaqeeya aaladaha ugu fiican Apple, oo ah nooc ogolaansho ka haysta ...
Bandhigga Subaxnimada Subaxnimadu waxay cusbooneysiineysaa qandaraaskeeda Apple TV +
Soo-bandhigaha taxanaha The Morning Show, waxay cusbooneysiisay qandaraaskeeda Apple TV + si ay u abuurto waxyaabo badan oo loogu talagalay barnaamijka fiidiyowga ee Apple.
Mid kamid ah soosaarayaasha silsiladaha Guryaha ee Quusta ah ee laga saxiixay Apple TV +
Ku darista ugu dambeysay ee Apple TV + si loo abuuro nuxurka asalka ah waa Annie Weisman, oo ka mid ah soo saarayaasha xilliyadii ugu horreeyay ee Qoysaska Quusta.
Apple Watch waxay ogaataa ischiemia wadnaha oo aysan ku arkin isbitaalka
Apple Watch waxay ogaataa angina haweeney 80 jir ah oo isbitaalka ku jirta oo aysan baari karin markii la waayey
Waxyaabaha la gashado sida Watch iyo AirPods ayaa hoos u dhiga dakhliga Apple
Markale Apple waxay muujisay inay ogtahay halka ay ku jihayso dadaalkeeda iyo faa iidooyinka ay soo saaraan kuwa la xidhan karo ayaa tusaale u ah tan.
Apple waxay u dirtay toddobo milyan iyo bar gaashaan wajiyada musqulaha adduunka
Wiilasha Cupertino, dadaalkooda si ay uga caawiyaan ciribtirka aafada Coronavirus, waxay muslimiinta u diri lahaayeen 7.5 milyan oo gaashaan waji ah.
Toddobaad ama laba toddobaad gudahood Australia iyo Awstaraaliya waxay arki karaan Apple Store oo furan
Dukaammada Apple ee Australia iyo Austria ayaa furmi kara dhowr toddobaad gudahood sida lagu sheegay bayaannadii shirkadda ee ugu dambeeyay
Barnaamijka Pandora ee loogu talagalay Apple Watch wuxuu hadda taageeraa Siri
Bishii Janaayo ee la soo dhaafay, Pandora wuxuu bilaabay codsi loogu talagalay Apple Watch, codsi ah bil kadib ...
Siri wuxuu ku fiicnaadaa codka dabiiciga ah ee Jarmalka
Dad badan ayey layaab ku noqotay, ka dib markii lagu dhawaaqay ogeysiisyada iOS 11, Apple waxay cusbooneysiineysaa codka Siri ee Jarmalka oo ka dhigaya mid aad u badan oo dabiici ah
Apple waxay qorsheyneysaa inay dib u furto Apple Store bisha May
Laga soo bilaabo Cupertino waxay qorsheynayaan inay dib u furaan Apple Store bisha Maajo oo dhan, illaa iyo inta la buuxinayo shuruudaha saxda ah
Imran Chaudhri wuxuu sharaxayaa faahfaahinta sida loo sameeyay Apple Watch
Imran Chaudhri wuxuu sharaxayaa faahfaahinta sida loo sameeyay Apple Watch. Leylihii ugu horreeyay wuxuu ahaa nano iPod ah oo lagu xiray suunka saacadda.
Taxanaha Apple Watch 5 wuxuu galayaa qaybta dib loo hagaajiyay
Apple wuxuu ku darayaa buugiisa alaabooyinka la cusbooneysiiyay ee dib loo soo cusboonaysiiyay lana dayactiray noocyadii ugu dambeeyay ee Apple Watch Series 5
Pixelmator ee macruufka waxaa lagu cusbooneysiiyay dhowr horumar oo shabakadda ah
Soosaarayaasha Pixelmator ee macruufka waxay ku darayaan taxane horumarineed faylka sahamiye kii ugu dambeeyay ee la sii daayay saacado yar ka hor
Apple wuxuu ku casuumayaa qaar ka mid ah horumarayaasha kal-fadhiga khadka tooska ah ee marin u helka
Apple waxay u dirtay qaar ka mid ah kuwa wax soo saara inay ku biiraan fadhiga khadka tooska ah halkaasoo looga wada hadli doono hirgelinta marin u helka codsiyada macruufka ah
Apple waxay ballaarisay adeegyadeeda kala duwan ee dalal cusub
Apple waxay soo kordhisay 20 wadan oo cusub halkaasoo labada App Store iyo Apple Music, Apple Arcade, iCloud, Podcast iyo Apple Music labadaba si rasmi ah loogu isticmaali karo.
Apple wuxuu la wadaagayaa tilmaamaha isku imaatinka iyo isticmaalka shaashadaha ilaalinta wajiga ee ay ugu deeqayaan Mareykanka
Apple ayaa sidoo kale wax ka badaleysa silsiladda wax soo saarkeeda si ay u soo saarto gaashaam waji ah oo caawiya musqulaha Mareykanka.
Dib-u-buuxinta Pad ee AirPods Pro hadda waa la iibinayaa
Apple horeyba waxay uga iibisay suufka AirPods Pro cusub adduunka oo dhan dukaankiisa internetka.
Taxanaha Apple Watch 6 wuxuu ku dari karaa culeyska iyo mitirka weerarka argagaxa
Taxanaha cusub ee Apple Watch Series 6 wuxuu ku dari karaa sheekooyin dhowr ah cabirka mitirka walaaca iyo weerarada argagaxa
Anker inuu soo saaro laba kamaradood oo cusub oo HomeKit ah oo ku habboon gudaha
Labada kamaradood ee cusub ee Anker ayaa suuqa ku garaaci doona bartamaha bisha May ee Amazon for 39 iyo € 49 siday u kala horreeyaan.
IPhone 12 wuxuu yeelan doonaa buundo yar iyo naqshad la mid ah iPad Pro
Xog cusub oo laga helay mustaqbalka Apple ayaa bilaabeysa, markan waa inaan ka hadalnaa iPhone 12, oo yeelan doona hal darajo dheeraad ah ...
Farriimaha tooska ah ee ku saabsan Apple Watch-kaaga mahadsanid Jay -Tweet ka soo qaado Watch-kaaga
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee Jay -Tweet ee barnaamijkaaga Watch, ayaa u oggolaaneysa dadka isticmaala inay daawadaan ama u diraan farriimaha gaarka ah ee Apple Watch.
HomePass waxaa lagu cusbooneysiiyay naqshad cusub iyo taageerro Gawaarida
HomePass wuxuu kaydiyaa furayaasha dhammaan aaladahaaga ku habboon ee HomeKit-ka si aad had iyo jeer u hesho iyaga oo la heli karo, iyo sidoo kale xulashooyinka kale ee xiisaha leh.
Martin Scorsese filimkiisa soo socda waxaa soo saari kara shirkadda Apple
Wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira Apple TV waxay soo jeedinayaan inuu wadahadal kula jiro Martin Scorsese, iyo sidoo kale ...
Apple TV + wuxuu furayaa qeyb weyn oo ka mid ah buugyaraha uu ku qoran yahay inta uu faafida socdo
Ragga ku jira Apple TV + waxay rabaan inay naga caawiyaan qufulka oo waxay sii daayaan qaar ka mid ah taxanahooda oo bilaash ah si aan ugu raaxaysanno maalmahan.
Disney + waxay gaaraysaa 50 milyan oo macaamiil 5 bilood ka dib markii la bilaabay
Tirada macaamiisha u ah Disney +, shan bilood ka dib markii la bilaabay, waxay gaarayaan 50 milyan, maaddaama ay shirkaddu hadda soo warisay.
Barnaamij cusub ayaa na tusaya kartida weyn ee dhibaatooyinka ka jira Apple Watch-keena ay leeyihiin xitaa xaddidaadaha hadda jira ee Apple soo rogto
Apple Music waxay horumarisaa lacag bixinta boqortooyada ee farshaxanno madaxbannaan
Apple mar kale waxay muujineysaa sida ay uga go'an tahay muusikada, gaar ahaan sumadaha madaxbannaan, iyaga oo u oggolaanaya inay soo ururiyaan royalties xagga hore.
Apple waxay ku baahin doontaa One World Together at Home, xaflada ka socota WHO iyo guriga Lady Gaga
Apple wuxuu qeyb ka noqon doonaa barnaamijyada ka baahin doona barnaamijka 'One World To Wadajir' guriga, xaflada guriga ee Lady Gaga oo ay la socdaan Chris Martin ama J Balvin
Laba calaamadood oo cusub oo muujinaya in iPhone 9 uu sii dhacayo
Laba calaamadood oo cusub oo muujinaya in IPhone 9 uu jidka ku soo jiro. Bakhaarka Shiinaha ee JD.com iyo shirkadda Waqooyiga Ameerika ee Verizon horeyba ugu soo darsay boggooda internetka.
Kaamirada 'Aqara G2H' waxay la jaanqaadi doontaa Fiidka Hubi ee HomeKit
Kaamirada cusub ee ilaalada ee ka socota shirkadda Shiinaha ee Aqara, nooca G2H, waxay la jaan qaadi doontaa Videok Homekit Secure waxaana la bilaabi doonaa 2020
Apple Music wuxuu ahaa adeegii labaad ee muusigga loogu adeegsiga badnaa 2019
Daraasad ayaa xaqiijineysa xogta wanaagsan ee Apple Music u dhigeysa inay tahay adeegii labaad ee muusikada socodka ee 2019.
NURVV Run, oo ah shaashad caqli badan oo ay ku jiraan dhaawacyada
Shirkadda Nurvv Run waxay soo bandhigeysaa qaabab cusub oo kormeeraya dhammaan faahfaahinta orodyahannada ugu baahida badan markay u baxayaan orod
LG waxay sheeganeysaa in qaar ka mid ah moodooyinka 2018 ay la jaan qaadi doonaan AirPlay 2 iyo HomeKit
LG ayaa dhawaan shaacisay inay ku bixin doonto taageero labada AirPlay 2 iyo HomeKit qaar ka mid ah moodooyinka Smart TV ee ay bilaabeen 2018.
Apple TV + wuxuu kuu ogolaanayaa inaad daawato labada qaybood ee ugu horeeya taxanahaaga adoon isticmaalin mudada tijaabada
Apple waxay noo ogolaaneysaa inaan ku raaxeysano labada qaybood ee ugu horeeya taxanaheeda oo dhan iyadoon la adeegsan mudada tijaabada 7-maalmood.
Hadda waxaad isticmaali kartaa Siri si aad uga dhageysato Spotify on Apple Watch
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee 'Spotify' ayaa kuu oggolaaneysa inaad xakameyso Spotify dib u soo celinta Aple Watch adoo adeegsanaya kaaliyaha Apple ee Siri.
watchOS 6.2.5 beta 1 oo hadda loo heli karo horumariyeyaasha
Horumariyayaashu waxay hadda haystaan ​​nooca beta-ka xiga ee watchOS 6.2.5 gacmahooda si ay u ogaadaan cayayaanka nidaamka cusub ee hawlgalka
Suugaanta iWork iyo iMovie ee loo cusbooneysiiyay macruufka iyadoo la adeegsanayo taageerada aaladda Keyboard
Apple waxay cusbooneysiisaa qolka iWork oo ay weheliso nooc cusub oo ah barnaamijka iMovie. Cusboonaysiinta ugu weyn ayaa ah iswaafajinta Keyboard-ka Magic ee iPad-ka
IOS 13.4.5 ayaa ogolaan doonta wadaagida heesaha Apple Music sheekooyinka Instagram
IOS 13.4.5 waxay u oggolaan doontaa dadka isticmaala inay si toos ah ula wadaagaan heesaha Apple Music ee ay ugu jecel yihiin sheekooyinka Instagram-ka
Lambarka IOS 14 wuxuu muujinayaa fargallada waxqabadka ilmaha ee watchOS 7
Lambarka iOS 14 wuxuu muujinayaa fargallada waxqabad ee carruurta ee watchOS 7. Giraanta cas waxay ku tusi doontaa waxqabadka daqiiqado halkii kalooriyeyaasha yaryar.
Foxconn waxay la kulantay hoos u dhac dakhli xitaa kahor COVID-19
Tirooyinka Foxconn ka hor dhibaatada coronavirus, ayaa durba ka muuqday hoos u dhac aad u weyn marka loo barbardhigo isla muddadii sanadkii hore.
Lens for Watch waa barnaamijkii ugu horreeyay ee lagu daro iibsashada barnaamijka
Codsiga lagu baarayo koontadayada 'Instagram' ee Apple Watch, Lens for Watch, wuxuu ku darayaa ikhtiyaarka iibsiyada isku dhafan ee saacadda lafteeda
Laba xanta oo ku saabsan Apple Watch: Aqoonsiga Taabashada iyo taxanaha 2 ayaa ka dhammaanaya daawada 7
Sida loogu diro fariin jadwalka ku jirta Telegram
Sideen u jadwal ugu sameyn karnaa farriinta Telegram si ay u soo dirto markasta oo aan rabno, iyadoo lagu darayo maalinta iyo waqtiga la soo dirayo
Apple Music ayaa bilaabi doonta inay noo soo dirto ogeysiisyo ay ka heleyso wararka ka imanaya farshaxanada aan jecel nahay
Ragga ka socda Cupertino waxay dhaqaajinayaan suurtagalnimada helitaanka ogeysiisyada sii deynta iyo wararka fanaaniinta aan ugu jecel nahay Apple Music.
Riwaayadaha loogu talagalay Apple TV-ga cusub + taxanaha "Difaaca Yacquub"
Trailer-ka filimka cusub ee Apple TV + ee taxanaya "Difaaca Yacquub". Waxaa jilaya Chris Evans (Captain America) iyo Michelle Dockery (Downton Abbey).
ECG ee Chile iyo dalal kale oo ay la socdaan warar dheeraad ah oo ka socda watchOS 6.2
Nooca cusub ee watchOS 6.2 wuxuu bixiyaa ikhtiyaarka ah in ECG looga isticmaalo dalal badan. Chile, Turkiga iyo New Zealand. Waxa kale oo ay ku dareysaa horumar kale
Dukaammada Apple ayaa albaabada loo furi karaa bartamaha bisha Abriil
Laga bilaabo Abriil 5, Dukaammada ugu horreeya ee Apple waxay bilaabi karaan inay furaan albaabadooda, waxay kuxirantahay horumarka coronavirus.
Apple Music waxay soo saartay liis cusub oo muusig leh oo naga caawinaya inaan kacno
Ragga ka socda Apple Music waxay bilaabeen liis cusub oo muusig ah oo leh muusig naga caawinaya inaan kacno maalin kasta, na toosinno ama naga dhigeysa inaan dhaqaaqno jirkeena.
Iibsashada caalamiga ah ee macOS iyo iOS hadda waa la heli karaa
Iibsashada caalamiga ah ee loogu talagalay barnaamijyada Apple hadda waa run, taas oo u oggolaanaysa isticmaaleha inuu ku bixiyo hal mar oo keliya iOS, iPadOS iyo macOS.
Apple TV-ga soo socda wuxuu yeelan doonaa ilaa 128GB iyo Module Ilmeed
Macluumaadka cusubi wuxuu xaqiijinayaa in TV-ga cusub ee Apple uu la imaan doono awood dheeri ah iyo Qaab-dhismeedka Carruurta ee cusub si loogu xakameeyo waxyaabaha ka kooban carruurta.
Kani waa Spyder, ciyaarta cusub ee Apple Arcade
Ciyaarta Spyder ee aan ka helno Apple Arcade waxay umuuqataa runtii madadaalo. Haddii aadan isticmaalin bisha bilaashka ah hadda waa waqtigii
Documentaries ku saabsan Apple [# QuédateEnCasa]
Si aad uga dhigto joogitaankaaga guriga mid aad u raaxeysan kara dhibaatooyinka Coronavirus, waxaan kuu dhaafey xulashada dokumentiyada ugu fiican ee ku saabsan Apple.
Kaaran karantiil si ka wanaagsan Alto's Odyssey iyo Alto's Adventure, bilaash dukaanka App
Hada waqti xaddidan waad soo dejisan kartaa labadan kulan, Alto's Odyssey iyo Alto's Adventure, gebi ahaanba waa bilaash App Store
Noggin wuxuu yimaadaa Apple TV, adeeg cusub oo lagu madadaaliyo kuwa yaryar ee gurigeenna jooga
Noggin waxay u timaadaa Apple TV inay noo keento Paw Patrol, Dora the Explorer, ama Peppa Pig. Soo Degso oo iskuday si bilaash maalmahan adag.
Apple ayaa ogolaan doonta in dib loo dhigo iibsiga bisha Maarso iyada oo la adeegsanayo Apple Card iyada oo aan dan laga helin dhibaatada Coronavirus
Apple wuxuu ku biirayaa Goldman Sachs adoo diraya emayl wargelin ah oo ku saabsan suurtagalnimada dib u dhigista lacagaha Apple Card iyada oo aan dulsaar laheyn Coronavirus.
Facebook wuxuu ku dhawaaqay macsalaameynta barnaamijka MSQRD
Facebook ayaa si rasmi ah u shaacisay inay ka saari doonto arjiga miiraha ee MSQRD maalmaha soo socda. Barnaamij horudhac ah ee miirayaashaas la tirtiri doono
Apple wuxuu geeyay in ka badan 40 milyan oo dharka la gashan karo rubucii ugu dambeeyay ee 2019
Apple waxay soo dirtay in ka badan 40 milyan oo la gashado sida Apple Watch iyo moodooyinka kala duwan ee AirPods inta lagu jiro rubuca afaraad ee 2019
Waa tan sida si sahlan loogu sii daayo booska qiimaha leh ee iCloud sidaa darteed maahan inaad bixiso wax aadan runtii u baahnayn
Telefoonno cusub, xakameynta waalidka, aaladda cabbiraadda cabbiraha iyo waxyaabo kale oo dheeri ah Apple Watch
Daadadka cusub ayaa noo sheegaya isbeddelada aan ku arki karno watchOS 7 iyo taxanaha soo socda ee Apple Watch 6 kadib xagaaga.
Codsiga Apple ee ah inuu iska ilaaliyo inuu 838 milyan siiyo shirkadda Caltech, lama aqbalin
Bishii Janaayo ee la soo dhaafay, xukunkii xeerbeegtida mid ka mid ah tijaabooyinkii kala duwanaa ee ...
Apple Watch wuxuu ogaan doonaa heerka oksijiinta ee dhiiga kujira
Apple waxaa laga yaabaa inay horey u leedahay muuqaal cusub oo diyaar u ah Apple Watch-ka soo socda: cabbira heerarka oksijiinta dhiigga oo noo soo sheeg marka ay dhacaan.
Cabsida cudurka loo yaqaan 'coronavirus' ee dalka Mareykanka ayaa bilaabay inuu noqdo mid aad uga walwal badan marka loo eego wadamada Yurub qaarkood. Qaar badan…
Ku dhowaad dhammaan Dukaamada Apple ee Shiinaha hadda way furan yihiin
28 ka mid ah 42 Apple Stores ah oo Apple ku qaybiyey Shiinaha, ayaa durbaba furan, inkasta oo qaar badan oo ka mid ah saacadaha la dhimay laga bilaabo 11 ilaa 6 galabtii.
Loolanka Waxqabadka ee Apple Watch oo si rasmi ah loo shaaciyey
Caqabada howlaha ee 8da Maarso durba waa rasmi oo si loo gaaro waa inaan soconaa, orodnaa ama ku soconaa kursiga curyaamiinta ee 20 daqiiqo ama ka badan
Maamulaha Sare ee Apple TV + wuxuu u dhaqaaqay Qarnigii 20aad Fox
Maamulaha hal abuurka Apple TV Michelle Medelovitz ayaa ku dhawaaqday inay ka baxeyso Apple TV kana shaqeyn doonto Disney
Bilawga dhow ee Powerbeats 4 cusub ayaa la xaqiijiyay
Daabacaadda astaamaha Powerbeats 4 ee faylka FCC ayaa xaday. Soo bandhigida dhagaha dhagaha ee cusub ee Apple ayaa la xaqiijiyay
Apple waxay diyaarineysaa tartan cusub oo dhaqdhaqaaq ah Maarso 8, Maalinta Haweenka Adduunka
Ragga ka socda Cupertino waxay bilaabeen tartan cusub oo ku saabsan Maalinta Haweenka Adduunka, 20 daqiiqo oo jimicsi ah adigana adigaa iska leh.
In kabadan kalabar Bakhaarada Apple ee Shiinaha ayaa durbaba furan
Maalmo ka dib, tirada Apple Store ee albaabada u furaysa ayaa sii kordheysa maantana waxaa horey u jiray 29 dukaan oo albaabada u laabay dalka Shiinaha.
Router-yada leh HomeKit way adkaan doontaa in la rakibo
Waxay umuuqataa in qaabeynta router-yada la jaan qaadaya HomeKit ay ku adkaandoonto fulinta. Amniga ayaa sidoo kale ka sareyn doona
Apple waxay u oggolaan kartaa imaatinka 'Spotify' HomePod marka lagu daro furitaanka dhinacyada saddexaad
Xanta ayaa bilaabeysa furitaanka suurtagalka ah ee Apple ee dhinacyada saddexaad ka dib baaritaannada ka dhanka ah kalsoonida taasoo noo oggolaaneysa inaan ku isticmaalno Spotify HomePod.
Mahershala Ali ayaa jileysa filim cusub oo ka socda Apple TV +
Filimka cusub ee Apple uu shaqeynayo waxaa jilaya labo jeer oo ku guuleystay Oscar Mahershala Ali
Apple Music waxay hagaajineysaa muuqaalka albums ka duwan
Apple Music waxay wanaajineysaa muuqaalka albumka beddelka ah. Hadda waxay ku tusaysaa dhammaan saxannada beddelka ah adoo taabanaya daboolka albumka aad dhageysaneysid.
Maamulaha Warner Music wuxuu ku biirayaa safka Apple Music
Maamulihii hore ee Warner Music wuxuu la saxeexday Apple inuu madax caalami ah ka noqdo dadaallada istiraatiijiyadeed ee muusigga ee Apple.
Apple wuxuu sii daayaa WatchOS 6.1.3 Hagaajinta Arrimo Culus
Nooca cusub ee watchOS 6.1.3 ayaa loo heli karaa si loo cusbooneysiiyo. Apple Watch waxay heshay nooc cusub oo lagu hagaajinayo cilladaha kala duwan
Sida loo isticmaalo Apple Watch si sawir looga qaado iPhone
Waxaan ku tuseynaa dhammaan xulashooyinka la heli karo si aad sawirro uga qaadatid Apple Watch-kaaga kamaradda iPhone-ka, laakiin waa ka fog tahay gacmaheena
Apple waxay sheegtay in iibka iphone ay dhibaato kala kulmi doonto coronavirus
Fayraska 'coronavirus' ayaa inta badan lagu eedeynayaa hoos u dhaca dakhliga ee shirkado badan ay ku dhici doonaan rubuca hore ee 2020.
Apple Music Replay waxay isu diyaarineysaa inay aruuriso hitskeena 2020
Apple waxay soo saartay liistada Apple Music Replay playlist si aan u ururin karno heesaha aan aad u dhegeysanno inta badan sanadkaan 2020.
Filimkii ugu horreeyay ee rasmi ah ee "Sheekooyinka Cajiibka ah", oo ah taxane ka soo muuqanaya 6-da Maarso Apple TV +
Filimkii ugu horreeyay ee rasmi ah ee Sheekooyinka Cajiibka ah ayaa hadda laga heli karaa kanaalka YouTube ee Apple TV +
Taageerada HomeKit waxay imaneysaa Linksys saddex-router router si dhakhso leh
Linksys waxay la midoobi doontaa Apple si ay u keento taageerada HomeKit ee loo yaqaan 'router-tri-router' si aan ugu xakameyno barnaamijka iOS Home.
Apple Watch wuxuu caawiyaa in lagu ogaado arrhythmia cunug 13 jir ah
Apple Watch wuxuu sii wadaa inuu cadeeyo kuwa ka shakiyay awoodeeda inay ogaadaan arrhythmias inaysan khalad badan noqon karin.
Pandora hadda wuxuu kuu oggolaanayaa inaad muusikada ka ciyaarto Apple Watch la'aanteed iPhone-ka
Ragga jooga Pandora waxay cusbooneysiiyaan barnaamijkooda Apple Watch iyagoo u oggolaanaya inay si toos ah uga sii daayaan Apple Watch iyaga oo aan haysan iPhone.
Strava ee loogu talagalay macruufka waxay ku milmeysaa HealthKit si ay uga soo dejiso jimicsiga Apple Watch
Strava ee loogu talagalay macruufka waxay ku milmeysaa HealthKit si ay uga soo dejiso jimicsiga Apple Watch. Hadda waxaad toos ugu gudbin kartaa Strava.
Suuqa kuhadalka smart smart-ka adduunka sidoo kale waxaa ku badan Amazon
Amazon ma aha oo kaliya boqorka dadka ku hadla caqliga ee Mareykanka, laakiin sidoo kale adduunka oo dhan, in kasta oo ay leeyihiin qayb yar.
YouTube waxay dooneysaa inay soo bandhigto nidaam adeeg oo la mid ah kanaalada Apple TV
Google wuxuu rabaa inuu ka boodboodo bixinta adeegyo kala duwan oo fiidiyoow ah isagoo ku daraya marinnada YouTube TV
Amazon waxay sii wadaa inay xukumaan warshadaha ku hadla caqliga ee Mareykanka
Amazon waxay sii wadaa inay noqoto boqorka Mareykanka suuqa loogu talagalay dadka ku hadla caqliga, iyadoo ay ku dhowdahay boqolkiiba 70%.
Sida loo arko ECG-yada la duubay ee Caafimaadka
Eeg diiwaanka dhammaan qalabka korontada ku shaqeeya (ECG) ee aad ka qaadatay barnaamijka Watch ee taleefankaaga iPhone
Kaliya 10% ee isticmaaleyaasha uqalma waxay kiciyeen sanadka bilaashka ah ee Apple TV +
Apple TV + waxay na siisay tijaabo hal sano oo bilaash ah markii aan iibsaneyno qalab cusub, laakiin kaliya 10% dadka isticmaala ee u qalma ayaa howlgeliyay.
Apple wuxuu dib u dhigaa dib u furitaanka Apple Store ee Shiinaha sababo la xiriira coronavirus
Taariikhda la filayo in dib loo furo ee Apple Store ee Shiinaha, Febraayo 9, ayaa Apple dib u dhigtay waqti aan la cayimin.
Apple waxay soo jeedineysaa in lagu iibsado barnaamijka gudaha watchOS 6.2
Nooca betaOS ee watchOS 6.2 wuxuu muujinayaa muuqaal cusub oo ku jira dukaanka barnaamijka wuxuuna la xiriiraa iibsashada gudaha-app-ka
Raadinta Apple TV cusub ayaa ka muuqda tvOS 13.4 Beta 1 code
Markii aan ka hadlayno cusbooneysiinta qalabka Apple waxaa had iyo jeer jira su'aal kama dambeys ah: Goorma ayuu TV-ga Apple?
Patent ka hadlaya Aqoonsiga Taabashada ee Apple Watch
Fasax u gaar ah Apple Watch ayaa soo jeedinaya furitaanka saacadda adoo farta saaraya dusha sare ee taajka dijitaalka ah.
Apple Watch wuxuu ka tayo roon yahay dhammaan warshadaha saacadaha Switzerland
Apple wuxuu dhaafeeyay warshadaha daawada Swiss-ka ee 2019, wuxuu soo diray 30.7 milyan oo qalab ah marka loo barbardhigo 22.5 milyan oo uu geeyay 2018.
Matt Birchler, wuxuu na siinayaa fikrad cusub oo loogu talagalay watchOS 7
Tani waa fikrad dhowr sifooyin iyo hagaajin ah oo uu keenay Matt Birchler, oo loogu talagalay qaybta xigta ee watchOS 7. Maxaad sugeysaa?
Loolankii Apple Watch ee shaqaalaha ayaa loo baajiyay coronavirus darteed
Apple waxay joojineysaa caqabadii ay u diyaarisay dhamaan shaqaalaheeda sababo la xiriira dhibaatada caafimaadka adduunka ee uu sababay coronavirus
Taxanaha Apple Foundation wuxuu noqon doonaa soosaarkii ugu weynaa taariikhda Irish
La qabsashada taxanaha buugga aasaasiga ah ee 'Isaac Asimov Foundation' ayaa noqon doonta tallaalkii ugu ballaarnaa ee wax soo saar ee Ireland, kana sarre mara Game of Thrones
LG wuxuu soo saaray barnaamijka Apple TV ee loogu talagalay 2019 TV-yada casriga ah, sidoo kale wuxuu imaan doonaa sanadka 2018
Ragga ku jira LG waxay ku daraan barnaamijka Apple TV barnaamijka TV-yada casriga ah ee laga bilaabay 2019, sidoo kale waxay imaan doonaan kuwa 2018 dhamaadka sanadka.
Ilaa 3-da Maarso, majiro AirPods Pro meel kasta
Saamiga cusub ee AirPods Pro ayaa sii xumaanaya Applena waxay siineysaa waqti sugitaan hal bil ah kuwa doonaya inay xoogaa iibsadaan
Apple TV wuxuu ku darayaa 11 fiidiyow oo cajiib ah oo shaashadda biyaha hoostooda ah
Apple TV wuxuu ku darayaa 11 fiidiyow oo cabsi badan oo shaashadda biyaha hoostooda ah. Mawjadaha, jellyfish, dolphins, shark, iyo xayawaanka kale ee biyaha hoostooda ku jira oo qurux badan.
Naqshadeynta taajka Apple Watch ayaa laga yaabaa inay ka jawaab celiso taabashada
Sharcigii ugu dambeeyay ee la xiriira Apple, wuxuu na tusayaa sida taajkii dhijitaalka ahaa u yeelan lahaa maalmaha lagu tiriyo Apple Watch
Apple waxay shaqaalaysiisaa injineerkii hore ee Netflix si loo hagaajiyo taageerada tiknoolajiyada
Saxiixii ugu dambeeyay ee Apple, Ruslan Meshenberg, oo ah saxiix ujeedkiisu yahay hubinta in adeegga fiidiyowga ee Apple uu soo bandhigo uusan soo bandhigin dhibaatooyinka tayada fiidiyowga
Apple waxay iibsatay xuquuqda Boys State documentary ee Apple TV +
Dokumenteriga Wiilasha Gobolka waxaa laga heli doonaa toddobaadyada soo socda kaydka adeegga fidinta fiidiyowga ee Apple.
Mar labaad, Apple Watch wuxuu ka badbaadiyaa adeegsade fillibrillia atrial
Apple Watch waa smartwatch aad u fiican, aad ayeyna u badan tahay in ay mar labaad ka badbaadisay isticmaale cusub falaarib atrial inta ay huruday.
Qalabkaaga cusub ee Apple waxaa ku jira hal sano oo Apple TV ah + si bilaash ah u isticmaal
Haddii aad iibsatay iPhone maalintii la bilaabay, ha ilaawin inaad dhaqaajiso sanadka bilaashka ah ee Apple TV + maxaa yeelay haddii aadan iibsan waad lumin doontaa
Macaamiisha Apple TV + waxay ka badan yihiin Disney + iyo Hulu
Sida laga soo xigtay The Wall Street Journal, adeegga fiidiyowga ee Apple ee qulqulka wuxuu yeelan karaa in ka badan 33 milyan oo macaamiil ah.
Apple wuxuu ku dhawaaqay xilli XNUMX ee Carpool Karaoke
Xilli ciyaareedkii saddexaad ee Carpool Karaoke wuxuu ka soo muuqan doonaa 24-ka Janaayo Apple TV +, wuxuu joogsan doonaa in laga helo Apple Music
Barnaamijka "Apple Watch Connected" ayaa ku siin doona abaalmarin ka shaqeynta qolka jirdhiska
Barnaamijka "Apple Watch Connected" ayaa ku siin doona abaalmarin ka shaqeynta qolka jirdhiska. Waxaad ka heli kartaa qiimo-dhimis khidmaddaada haddii aad si adag u shaqeyso.
Apple Arcade wuxuu kordhiyaa sumcadda uu ku leeyahay Apple Store
Apple Arcade waxaa lagu dalacsiinayaa dukaamada Apple-ka markanna kan Fifth Avenue wuxuu bixiyaa meel cayiman oo ciyaarta ah
Muuqaalkii ugu horreeyay ee taxanaha LGTBI ee shirkadda Apple TV + ayaa hadda la heli karaa
Adeegyada fiidiyowga ee qulqulaya kuma noolaanayaan oo keliya taxanaha TV-ga. Labada filim iyo dukumintariba waa ...
Kiiboodhka Xigta ee Smart-ka ah ee iPad-ka ayaa isticmaali doona farsamada maqaska
Farsamaynta balanbaalis ee ay Apple ka soo saartay gacanteeda sanadkii 2016 markay soo bandhigtay noocyada cusub ee 'MacBook' ...
Apple wuxuu bilaabaa tartan cusub oo ah Waxqabadka Febraayo
Laga soo bilaabo Cupertino waxay ka bilaabayaan loolan waxqabad oo cusub shaqaalahooda oo dhan iyagoo ujeedkoodu yahay inay xiraan dhammaan giraanta Waxqabadka bisha Febraayo.
Horeba waxaa loo haystaa taariikho Apple TV + oo loogu talagalay 2 taxane cusub: mid uu qoray Steven Spielberg iyo kan kale ee Ingiriiska ah
Horeba waxaa u jiray taariikho sii deyn ah oo laga sii daayay Apple TV + oo loogu talagalay 2 taxane cusub: mid waxaa qoray Steven Spielberg iyo kan kale ee Ingiriiska ah. Midka koowaad ee Maarso 6 iyo tan labaadna 1da Maajo.
Taxanaha Chris Evans Wuxuu u Difaacayaa Jacob barnaamijka Apple TV + wuxuu soo baxay Abriil 24
Taxanaha difaaca Jacobs, oo uu jilayo Chris Evans, wuxuu ku imaan doonaa adeegga fidinta fiidiyowga ee Apple oo leh seddexdiisa qaybood ee ugu horreeya Abriil 24.
Apple TV, xaadirka iyo mustaqbalka xarunta Apple multimedia
Apple TV waa badeecad si gaar ah ugu soo korodhay waqti ka dib awood ahaan iyo shaqeyn ahaanba, ...
Hoyga Kahor Madowga oo laga daawado Apple TV + Abriil 3
Hoyga Kahor Madoobaa waa taxanaha cusub ee imanaya adeegga fiidiyowga ee Apple. Waxay sidaa yeeli doontaa 3da Abriil oo bilowga saddexda qaybood ee ugu horreeya ayaa la heli doonaa.
Tilmaamaha saxda ah ee Apple TV + markaa waxba ha moogaan
2020 shaki la'aan waxay noqon doontaa sanadkii Apple TV +, marka waxaan kuu keenaynaa tilmaan qeexan oo leh wax kasta oo la heli karo iyo waxa soo socda.
Apple iyo NBA si loo abuuro liis ay ku qoran yihiin farshaxanno madax-bannaan oo ka tirsan Apple Music
NBA iyo Apple waxay ku midoobeen xoogooda si ay u abuuraan liistada muusikada Apple Music oo ka kooban farshaxanno madaxbannaan oo hip-hop ah.
Sidee iyo halka laga arko talaabooyinkaaga celceliska sanadlaha ah ee iPhone
Sida ugu fudud ee loo arko celceliska sanadlaha ah ee talaabooyinka aad ku qaaday barnaamijka caafimaadka ee iphone
Apple waxay sii deyneysaa 'Bangiga' bisha Maarso inkasta oo eedeymaha xadgudubka ee jilayaasha dhabta ah
Kadib eedeymaha u dhexeeya xubnaha qoyska soo saarayaasha, Apple waxay go'aansatay inay siideyso filimka Bangiga ee tiyaatarada iyo Apple TV +.
Iswaafajinta HomeKit ee indhoolayaasha IKEA ayaa dib uga dhacay Spain
Hadda shirkadda Iswidishka ayaa ka digtay in dadka isticmaala Yurub ay sugi doonaan cilado farsamo awgood.
Apple waxay kiraysatay Lee Eisenberg, oo ah abuuraha Xafiiska, barnaamij cusub oo Apple TV + ah
Ragga ka socda Cupertino waxay heshiis la gaareen abuuraha Xafiiska, Lee Eisenberg, si uu ugu abuuro waxyaabo cusub Apple TV +.
WhatsApp wuxuu kuu ogolaanayaa inaad awood u yeelatid Habka Isticmaalka Xogta Yar
WhatsApp ayaa loo cusbooneysiiyay macruufka iyada oo isbeddel lagu sameeyay qaabeynta taas oo u oggolaaneysa adeegsadaha inuu awood u yeesho qaabka xogta la dhimay
HomeRun, ka xakamee HomeKit taleefankaaga Apple Watch
HomeRun waxaan si fudud oo dhaqso ah u xakameyn karnaa jawiga aan ku haysanno HomeKit oo ka socda Apple Watch oo hal taabasho ah shaashadda.
Jilaaga Dave Bautista ayaa qeyb ka noqon doona jilaayaasha qeybta labaad ee filimka See
Jilaaga legdinta Dave Bautista si uu ugu biiro jilayaasha haatan ee taxanaha Arag ee laga helo Apple TV +
Qalabka qiimeynta Apple ayaa hoos yimaada barnaamijka Apple Trade In
Ragga ka socda Cupertino waxay la qabsadaan dhammaan qiimaha Apple Trade In barnaamijka: hadda waxay na siin doonaan wax ka yar si aan u beddelno qalabka.
Cilad xagga amniga ah oo ka jirta barnaamijka TikTok ayaa banaanka soo dhigaysa xogta malaayiin isticmaale
Cilad ku timid barnaamijka TikTok ayaa banaanka soo dhigeysa xogta shaqsiyadeed ee malaayiin isticmaale. Waxaa lagugula talinayaa inaad cusbooneysiiso sida ugu dhakhsaha badan
Ogaanshaha dayrta ee Apple Watch waxay u dirtaa shaqaalaha caafimaadka gurmadka samatabbixiye
Waad ku mahadsantahay dhicista dayrta ee Apple Watch Series 4 iyo wixii ka dambeeya, isticmaale ayaa awood u yeeshay inuu badbaadiyo noloshiisa kadib markii uu miyir daboolmay kadib markii uu ku dhacay shil baaskiil
Eve waxay soo bandhigeysaa Kaamirada Amniga ee HomeKit cusub oo la jaan qaadi karta
Nidaamka Eve wuxuu soo saaray Eve Cam, kamarad cusub oo amniga ku habboon oo HomeKit Secure ah
Waa maxay sababta aan isbeddellada ugu muuqan waxqabadkeyga Apple Watch?
Maxay dhammaan isbeddellada u muujinayaan barnaamijkeyga Apple Watch Activity? Waxaa laga yaabaa inay kugu dhacdo adiga oo kale
Riwaayad loogu talagalay Apple TV-ga cusub + ee taxanaha ah: "Quest Mystic: Raven's Banquet"
Riwaayad loogu talagalay Apple TV-ga cusub ee taxanaha ah: "Quest Mystic: Raven's Banquet". Majaajilo ku saleysan dhibaatooyinkii koox abuureyaal fiidiyoow ah.
Aura Strap waa suun casri ah oo loogu talagalay Apple Watch oo hadda waa la keydin karaa
Aura Strap ayaa hada si rasmi ah u ah badeecad diyaar u ah iibsashada iyadoo suunkaan aan ku heli karno xog ku saabsan fuuq-baxa, jirka jirkiisa iyo waxyaabo kale oo badan
Codsiyada ugu wanaagsan ee looga faa'iideysto Apple Watch-kaaga
Waxaan kuu keenaynaa sagaal codsi oo aad uga faa'iidaysan karto Apple Watch-kaaga, hubaal in badan oo iyaga ka mid ah aadan aqoon.
Bandhigga Subaxnimadu waxay ku guuldareysaneysaa inay ku guuleysato Golden Globes
Apple ayaa ka soo baxday Golden Globes iyada oo aan wax abaalmarin ah la siin inkasta oo la magacaabay 3 jeer.
Daahyada caqliga leh ee IKEA waxay helayaan iswaafajinta HomeKit
Hadda IKEA noocyadeeda kala duwan ee indhoolayaasha caqliga iyo daahyada leh waxay helayaan cusbooneysiin ka dhigaysa iyaga inay ku habboon yihiin HomeKit.
TV-yada cusub ee LG-ga oo leh 8k xal oo la jaan qaadaya AirPlay 2 iyo HomeKit
LG waxay si rasmi ah u soo bandhigtay sharadkeeda 2020 qaybta telefishanka ee moodooyinka la jaan qaadaya ilaa 8k ee la jaan qaadaya AirPlay 2 iyo HomeKit.
Jimmy Iovine wuxuu sharxayaa sababta uu uga tagay Apple Music
Jimmy Iovine ayaa wareysi uu siiyay The New York Times wuxuu ku sheegayaa waqtigiisii ​​Cupertino mahadsanidiin Apple Music, bixitaankiisa, iyo caqabadaha heesaha qulqulaya
Luxshare Precision, oo ah hal shirkad oo dheeraad ah oo Apple ah sida uu qabo Kuo
Alaab-qeybiyeyaasha cusub ee soo saarista qalabka Apple ayaa madaxooda kor u qaadaya sida uu qabo falanqeeyaha Ming-Chi Kuo. Luxshare Sax, mid ka mid ah
Apple wuxuu joogi doonaa CES 2020 magaalada Las Vegas xidigtiisuna waa HomeKit
Apple wuu ogyahay in HomeKit uu si weyn u soo jiito macaamiisha elektaroniga oo uu doonayo inuu cadeeyo isagoo ka qeyb galaya CES 2020.
Barnaamijka Nike Run Club ma cusbooneysiinayo
Cusbooneysiin ku saabsan barnaamijka Nike Run Club ee wareejiya oo aan ku rakibin iPhones. Tani waxay ku dhacaysaa dadka isticmaala qaarkood
Apple waxay bilaabi kartaa Apple Watch PRODUCT (RED) guga
Sida laga soo xigtay degel Faransiis ah, waxaan ku yeelan karnaa casaan Apple Watch guga guga Apple ee PRODUCT (RED) ee la dagaallanka AIDS-ka
Sida loo istcimaalo bey'ada HomeKit iyo otomaatiyada
Waxaan kuu sharraxeynaa sida aad u isticmaali kartid Guryaha 'HomeKit' iyo Aalado otomaatiga, xulashooyinka qaabeynta ee ay leeyihiin iyo tusaalooyin wax ku ool ah.
Waxay Apple u geynayaan maxkamad si loo ogaado laxanka aan caadiga ahayn ee Apple Watch
Dhakhtar ka socda jaamacada New York ayaa dacweeyay shirkadda Apple ka dib markii uu ku xadgudbay patent-kiisa shaqadiisa ogaanshaha laxanka oo aan joogto ahayn ee Apple Watch
Apple waxay noo keeni doontaa App Store inta u dhaxeysa 24 ilaa 29 Diseembar
Wiilasha Cupertino waxay soo ceshadaan maalmo hadiyadeed App Store ah laga bilaabo Diseembar 24 ilaa 29: qiimo dhimis ku saabsan iibsashada gudaha iyo barnaamijyada bilaashka ah inta lagu jiro Kirismaska.
Satechi wuxuu soo saaray xireyaasha USB-C ee Apple Watch
Shirkadda Satechi ee qalabka waxay soo saartay xeedho cusub oo loogu talagalay Apple Watch oo leh xiriir USB-B, oo ku habboon in lagu soo dallaco iPad Pro.
Apple Watch ee soo socota waxay lahaan kartaa Crown Digital cusub oo u shaqeeya sida joystick
Ragga ka socda Cupertino waxay fayl gareeyaan patent cusub oo saadaalinaya waxa noqon kara Digital Crown-ka cusub ee soo socda ee Apple Watch Series 6.
Apple wuxuu tirtirayaa codsigii u badalay iphone-keena iPod
Codsiga muusigga ee noo oggolaaday inaan soo dejino maqaar si aan u siino naqshad la mid ah iPod, ayaa laga saaray App Store.
Adobe Photoshop wixii cusbooneysiinta iPad-ka ah "guji xulashada"
Adobe Photoshop ayaa loo cusbooneysiiyay nooca 1.1 oo leh isbeddelo badan iyo horumarin. Kudar "Xulista Mawduuca" habka caqliga badan iyo warar dheeri ah
Apple Podcast ayaa hadda laga heli karaa Amazon Echo ee Mareykanka
Barmaamijka Podcast-ka ee Apple ayaa hadda si buuxda looga heli karaa Amazon Echo oo ku taal Mareykanka, sidaa darteed waqti dheer kuma qaadaneyso inuu gaaro dalal kale.
Apple waxay iibsatay xuquuqda dokumenteriga Billie Eilish, waxaan ka arki karnaa Apple TV +
Wiilasha Cupertino ayaa istaagaya si ay u helaan dokumentari ku saabsan nolosha iyo soosaarka fanaan Billie Eilish, oo dhowaan laga heli doono Apple TV +.
Daraasad ayaa lagu falanqeynayaa qanacsanaanta ganacsatada leh kaararka 'elite' sida Apple Card
Ganacsatadu waxay umuuqdaan inaysan rabin kaarka Apple maadaama loo arko inuu yahay kaarka Elite oo xamuul badan ku qaadaya baanka.
Barnaamijka Apple Store waxaa loo cusbooneysiiyay nooca 5.7
Apple waxay cusbooneysiisaa dalabka Apple Store si loogu daro hagaajinta xulashooyinka wax iibsiga iyo ku darista uruurinta alaabada ku jirta Wallet
Waxay dib-u-furayaan borotokoolka 'AirPlay 2' kaas oo u oggolaan doona shaqadan in loo adeegsado kuwa ku hadla hadalka aan la taageerin
Tiknoolajiyadda ka dambeysa AirPlay 2 waa la jabsaday sidaas darteed waa waqti in la helo ka hor intaan loo helin dadka hadlaya ee aan la taageerin.
Nomad wuxuu bilaabayaa xargaha maqaarka cusub ee biyuhu xiraan
Shirkada caanka ah ee Nomad ayaa hada biloowday Apple Watch oo ah xargaha maqaarka ee biyaha celiya ee quruxda badan
AirPlay 2 iyo HomeKit waxay bilaabeen inay ku yimaadaan qaar ka mid ah moodooyinka Sony TV
Sony wuxuu bilaabay cusbooneysiinta moodooyinka TV-ga ee la sii daayay 2018 iyo 2019 si loogu daro taageerada HomeKit iyo AirPlay 2.
Ku ilaali Apple Watch-kaaga OtterBox EXO Edge Case
Ku ilaali Apple Watch-kaaga cusub kiiska 'OtterBox Exo Edge Case'. Hab cusub oo Apple Watch kaaga looga ilaaliyo naxdin
Siri wuxuu ka hor imanayaa saadaasha hawada ee BBC-da toos
Apple Watch iyo Siri waxay khiyaamo ku ciyaaraan khabiirka saadaasha hawada waxayna ka hor imaanayaan saadaashiisa uu si toos ah ugu tebinayo BBC-da iyadoo ay ku nool yihiin malaayiin daawadayaal ah
Apple wuxuu ku darayaa kharashka dhoofinta si AirPods ay u yimaadaan dhowr maalmood ka hor
Apple wuxuu ku darayaa kharashka dhoofinta AirPods Pro si ay u yimaadaan seddex maalmood kahor maraakiibta caadiga ah oo aan qiimo lahayn
Kuwani waa badeecadaha Apple ee noo oggolaanaya inaan helno kaarka hadiyadda ah illaa 200 euro
Sidii shirkadda ku saleysan Cupertino ay ku dhawaaqday maalmo ka hor, Apple waxay xirtay boggeeda saacado kooban ...
Saddexda qaybood ee ugu horreeya "Adeeg" ayaa hadda laga heli karaa Apple TV +
Sidaan maalmo kahor kugula socodsiinay, Apple waxay diyaar u tahay dhamaan macaamiisha Apple TV +, a ...
Dukaammada Apple ayaa midabkoodu casaan u yahay si loogu dabaaldego Maalinta AIDS-ka Adduunka
Hal sano oo kale iyo 13 sano ka hor, Apple Stores waxay bilaabeen inay midab casaan ah u muujiyaan sida ay uga go'an tahay ka hortagga cudurkan.
Qalabyada Cusub ee Iswaafaqsan ee HomeKit
Website-ka 'HomeKit' ayaa hadda soo kordhiyay router cusub oo la jaan qaadi kara HomeKit iyo kamaradaha amniga.
Baahida sare ee AirPods Pro ayaa labanlaabmi karta wax soo saarka
Soo-saarka cusub ee AirPods Pro wuxuu ka koror doonaa bil kasta hal illaa laba milyan oo unug. Waxay u muuqataa in ololaha Kirismaska ​​uu socdo
Taxanaha TV-ga ee Shyamalan + Addoon ayaa cusbooneysiinaya xilli labaad
Taxanaha qarsoodiga ah, Adeeg, oo ku iman doona Apple TV bisha Noofambar 28, ayaa mar horeba la cusbooneysiiyay xilli labaad.
Maamulaha shirkada Condé Nast oo aan sidaa u hubin Apple News + Ayaa Noqon doonta Guul
Shirkadda weyn ee daabacaadda ee Condé Nast, waxay ku xaqiijineysaa agaasimaheeda guud, in mustaqbalka Apple News + uusan aad u caddayn maadaama xilligan uusan muujin wixii ay ballanqaaday
Habka mugdiga ah, qaabeynta iyo hagaajinta sanduuqa. Kani waa nooca cusub ee Spark
Spark ayaa hada heshay nuuc cusub oo ku daraya Moodow Madoow iyo astaamo kale oo caan ah iyo horumarin. Macaamiil emayl wanaagsan
Apple waxay diirada saari doontaa Windows si ay u bilaabaan barnaamijyo cusub
Apple waxay raadineysaa injineero softiweer ah si ay u abuuraan codsiyo loogu talagalay Windows, ugu yaraan taasi waa waxa laga helo ...
Fasax ku saabsan Apple Watch wuxuu ku xiraa Face ID
Apple wuxuu helaa shati ay codsatay dhowr sano ka hor waxayna la xiriirtaa xargaha Apple Watch iyo imaatinka suuragalka ah ee Face ID
Waxaan horeyba gacanta ugu haynaa qaybtii shanaad ee saddexda taxane ee ugu muhiimsan ee Apple ay nooga diyaarisay Apple TV +.
Jiilka seddexaad ee AirPods, nooca Pro, wali ma bixinayo tayo cod leh oo ka sareysa Samsung Galaxy Buds, oo ah qaabka ay ku garaacaan dhamaan soo saarayaasha sida ku xusan Warbixinta Macaamiisha.
Apple Watch wuxuu caawiyaa hagaajinta nolosha qofka autism-ka
Apple Watch waxaa loo beddelay qalab naga caawinaya hagaajinta jirkeenna iyo caafimaadkeenna, wax ...